အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားညီညွတ်… – PVTV Myanmar
·9months ago ·49 Comments
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီကိုယ်စား မင်းကိုနိုင်၏ ကြေညာချက်
Like – 145K Share – 43054
Dennis Karl says:
ဦးမင်းကိုနိုင်ကို ပြန်လည် တွေ့မြင်ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်
NUG ကို ကြိုဆိုပါတယ်
Theodora Thwel says:
2021-04-16 at 1:35 PM
အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးစီးခြင်း
၁၆ – ၄ – ၂၀၂၁
ကျန်းမာရေးလဲ ဂရုစိုက်ပါရှင့် ၊ ပြည်သူဘက်က ရှိပေးလို့ အမြဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရှင့် 🙏🙏🙏
Nyo Khet Pisi says:
2021-04-16 at 1:36 PM
သေသေချာချာဦးဆောင်ပေးပါ CRPH နဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရေ
Tin Ma Ma Tun says:
ကိုမင်းကိုနိုင် အန္တရာယ်ကင်းအောင်နေပေးပါ၊ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ကဲ့သို့ နိုင်ငံအပေါ်၊ ပြည်သူအပေါ် အရိုးသားဆုံး ပေးဆပ် ၊ ကိုယ်ကျိုးမဖက်၊ ဖြူစင်စွာခေါင်းဆောင်မှူပေးတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ လိုအပ်လို့ပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊
Nann Waddy says:
2021-04-16 at 1:39 PM
မိန့်ခွန်း​တွေကို print ထုတ်ပြီး ပြည်သူ​တွေသိ​အောင် ဖြန့်​ဝေ​ပေးသင့်ပါတယ်။
KhineThin Phyu Win says:
We strongly support NUG. အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်။ 💪🙏
Thu Zar Lwin says:
2021-04-16 at 1:40 PM
အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ေတာ့မည္ ဟိုမသာေတြ က်ဆံုးေတာ့မည္
2021-04-16 at 1:41 PM
Míñ Thâñt Zîñ says:
Hninhnin Wai says:
အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရအား အပြည့်အဝ ထောက်ခံပါသည်။
လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏ အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်။
Thein Thein Nwe says:
Miemie Nwe says:
We strongly support National Unity Government!
အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည် ✊🏻
Eaint Htet says:
ပြည်သူသာလျှင် အဓိက အ​ရေး​တော်ပုံ ​အောင်ရမည်
အမျိုးသားညီညွတ်​ရေးအစိုးရအား ကြိုဆို ​ထောက်ခံပါတယ် ခင်ဗျာ
Cho Nwe Soe says:
2021-04-16 at 1:44 PM
Ashin Cakkapala says:
အားတက်ဝမ်းမြောက်ရပါသည်။ နွေဦးတော်လှန်ရေး သူရဲကောင်းများအားလုံး ကိုယ်ကျန်းမာ၍ စိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။ လိုရာပန်းတိုင်သို့ ဘေးမသီ ရန်မခ အမြန်ဆုံး ရောက်ရှိပါစေသတည်း။
Wint Cho says:
We fully support CRPH and NUG. We all are with our legitimate government. We are ready to change the future of Myanmar.
Hlaing Hlaing Tun says:
2021-04-16 at 1:45 PM
We support with NUG
ရွှေ ပိုး ကောင် says:
နားထောင်ပြီးတော့ဝမ်းသာလွန်းလို့ မျက်ရည်ကျရတယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့ သွေးချင်းများကို ပိုချစ် ပါမယ်။ပိုညီညွတ်ကြပါမယ်❤️
Ko Shine Min Thant says:
2021-04-16 at 1:46 PM
We support UNG!အ​ရေး​တော်ပုံ​အောင်ရမည်။
We stand with NUG. အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်၊
အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည် အရေးတော်ပုံ အောင်ရမယ် အရေးတော်ပုံ အောင်ရမယ်ဗျာ။ အားမလျှော့ပါနဲ့၊ လက်မလျှော့ကြပါနဲ့။ အားတင်းပြီး ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြပါဗျ။
သဲ နွေ ဦး says:
အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးရကို ဂုဏ်ယူစွာ ကြိုဆိုပါတယ်.👏👏👏
Zwe Thiha Kyaw says:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကြက်သီးတွေတောင်ထတယ်။ အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။
Shwe Lone says:
National Unity Government အား 100% ထောက်ခံပါသည်။
Zee Kwat says:
ဟုတ်ပါတယ် အမြစ်ဖြုတ်ပစ်ရမှာပါ …. ခက်ခဲတယ် မလွယ်ကူဘူး တခါတလေ စိတ်လျော့မလိုပဲ …. အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ တောင့်ခံနေပါတယ် ….. ဒီတော်လှန်ရေးပြီးရင် ခလေးတွေကို တက္ကသိုလ်မှာပဲ ဆုံစေချင်ပြီး ကျမတို့လဲ နိုင်ငံတကာနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းချင်လှပါပီ ….
ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ လောဘက အတောမသတ်လို့ ဘာတခုမှ ညှိနှိုင်းစရာမလို တွန်းလှန်ပစ်ရမှာပါ …
Well speech Ko MKN !!!
Chitsu Honey says:
2021-04-16 at 1:49 PM
တရားမျှတရေး လွတ်လပ်ရေး တန်းတူညီမျှရေး 💪💪💪
အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည် 💪💪
Thein Gi says:
2021-04-16 at 1:50 PM
We warmly welcome National Unity Government.
Nandar Kw says:
Thank you from my bottom of heart to our leaders, our generation Z ,our civilians and people around the world who standing with us. The dictatorship must fail and Justice must prevail. We will looking forward our brighter future and flowers blossom in Myanmar.
Juin's Souhait says:
နားထောင်ရင်း မျက်ရည်ကျရတယ်။ အမြစ်မကျန်အောင် ရုန်းကြရတာဆိုတော့ နာကျင်ရတာပေါ့။ အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်။ ✊🔥
Nu Nu Htwe says:
2021-04-16 at 1:54 PM
​အောင်မြင်မှာပါ။ ​ကြေညာချက်ထုတ်ပြီး ၁၀မိနစ်အတွင်း မိုး​တွေစရွာတာဆို​တော့ မကြာခင်​အေးချမ်း​တော့မှာပါ။
Hnin Htet Thick Sar says:
ပြည်သူတွေ လမ်းစပျောက်နေချိန်မှာ အလင်းရောင်နဲ့ လမ်းပြန်ဖွင့်ပေးနိုင်ကြလို့ CRPH. KIA. KNUမှအစ အသက်ပေးလှူတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သော ရဟန်းရှင်လူ အပေါင်းအစဥ်လေးစားကြိုဆိုပါသည်။ မြန်မာပြည် ပြန်လည် ဒီမိုကရေစီအပြည့်အဝရအောင် အဘက်ဘက်မှကြိုးပမ်းကြသူများ
မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူးမှာ ဘေးရန်ကင်းကွာပီး လိုရာပန်းတိုင်ကို
အချိန်တိုတို ရက်တိုတိုနဲ့ ရောက်ရှိပါစေ။
မင္း ထြန္း says:
အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရ အဖွဲ့အား အားရ၀မ်းသာ ကြည်နူးစွာဖြင့် ထောက်ခံပါသည်။ အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည် 💪💪💪💪💪
May Thu Soe says:
We strongly support NUG and CRPH. Thank you so much for all your efforting.
Khinlay Thein says:
2021-04-16 at 2:29 PM
Very well said Ko MKNaing. My heartfelt congratulations to CRPH!. All your efforts have been appreciated. May I thank you from the bottom of my heart. My salute to all the fallen heroes particularly those from
Frigga Thet says:
ကြက်သီးထပြီးမျက်ရည်တောင်ဝဲမိတယ် ။ အမြစ်ပါမကျန်အောင်ရုန်းကြရတာဆိုတော့နာကျင်ရတာပေါ့ ဆိုတဲ့စကားကရင်ထဲတကယ်ထိပါတယ် ။ ကိုမင်းကိုနိုင် အန္တရာယ်ကင်း ကျန်းမာအောင်နေပါ ။ ပြည်သူအပေါ် အရိုးသားဆုံးနဲ့ဖြူစင်စွာ ပေးဆပ်ပီး ခေါင်းဆောင်ပေးတဲ့ အကိုလိုလူမျိုးက တကယ်လိုအပ်ပါတယ် ။ အရေးတော်ပုံအောင်ရမည် ✊✊✊
Zozo Zanylay says:
2021-04-16 at 2:42 PM
ပြီးခါနီး​ပြောတာ​လေးက အထိဆုံးပဲ တနယ်စီ​နေကျ​ပေမယ့် စိတ်​တွေနီးစပ်​နေကျသလို နားလည်မှု​တွေရှိကျတာ အားရပါတယ် တက္ကသိုလ်မှာဆုံရ​တော့မှာပါ
Ma Sabai says:
2021-04-16 at 2:52 PM
ပြည်သူတွေ မျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ အစိုးရသစ်
ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ပီတိတွေနဲ့ ကြိုဆိုပါတယ်။
Michelle Thwel says:
2021-04-16 at 3:01 PM
အဆုံးထိ CDM ပါ. ကိုယ်လုပ်နိုင်တာ ဒါပဲရှိလို့ အားမလိုအားမရဖြစ်မိပါတယ်. ​နွေဦး​တော်လှန်​ရေး အမြန်ဆုံး​​အောင်မြင်ပါ​စေ.
May Hla Win says:
2021-04-16 at 3:32 PM
အရမ်း ဝမ်းသာ အားရလိုက်တာ နှစ်ခြောက်ဆယ်ကျော် ပေးဆပ်မှု နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ကို နောင်လာမျိုးဆက်သစ် တွေ ပါ ခံစားရပြီ
Nero Thae says:
2021-04-16 at 3:33 PM
မြန်မာနိုင်ငံမှာနေလာခဲ့သမျှပြက္ခဒိန် ၃၁ ခုမှာ မြန်မာလူမျိုးတေ တိုင်းရင်းသားတေ အကုန်ညီညွတ်တာကိုမြင်ဖူးတာ ဒါပထမဆုံးပဲ
နောက်လဲ အာ့လိုပဲ လူမျိုးဘာသာမခွဲကြပဲဆက်လက်ညီညွတ်ကြမယ်ဆိုတာကတော့ ပြောစရာတောင်လိုမယ်မထင်
We strongly support National Unity Government.
2021-04-16 at 3:59 PM
We support National Unity Government.အကြိမ်ကြိမ်စစ်တပ်ရဲ့လိမ်ညာဖျက်စီးခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ 1947 ပင်လုံစာချုပ်ပါ ဖက်ထရယ်ရဲ့အနှစ်သာရတွေ မြန်မာပြည်သူတွေ ပြည့်ပြည့်ဝဝခံစားရ ပိုက်ဆိုင်ရတော့မည်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာ။အနာဂတ်မြန်မာနိူင်ငံတော်ကြီး တိုးတက်ဝေစည်သာယာဘို့ ကြိုးစားကြပါစို့။UNG ကိုလှိုက်လှုဲစွာ ကြိုဆိုထောက်ခံလျက်…….
2021-04-16 at 4:29 PM
ခုဆိုရင် ထင်းတစ်ချောင်းခြင်းစီ အစီးပြေနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ တစ်စုတစ်စီးတည်း ထင်းအစည်းကြီးဖြစ်သွားပါပြီ။ အားရကျေနပ်လိုက်တာ။ ငါ့လူမျိုး သူ့လူမျိုး ငါ့ဘသာသာ သူ့ဘာသာ ဆိုတာမျိုးတွေ မရှိတော့ဘူး။ အားလုံးသည် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပါပဲ။
လှ ဟန် says:
CRPH နဲ့့ တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေကို လေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကို ထောက်ခံကြိုဆိုပါတယ်။ တစ်ခါှဲ မကြုံဖူး မမြင်ဖူး‌အောင် စည်းလုံးညီညွတ်ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ၊ လူငယ်တွေ၊ ပြည်သူတွေကိုလည်း ဂုဏ်ယူပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင် လုံးဝ ပျက်သုဉ်းကွယ်ပျောက်တဲ့နေ့ အမြန်ရောက်ပါစေ။
Do Lay Mung says:
2021-04-16 at 7:23 PM
ဒီလိုသတင္းေတြ ၾကည့္ရတာ အရမ္း ဝမ္းသာပါတယ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လဲ ျပည္ပ ကေန တဖက္တလွန္က ကူညီေထာက္ပံ့ ေနပါတယ္ အာဏာ ႐ွင္စနစ္ ၾကဆံုးပါေစ ေရးေတာ္ပံုေအာင္ရမည္ ျမန္မာ နိုင္ငံ ထဲ့မွာ မ႐ွိတာ အားလို႔ အားမရျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က ျပည္ပေရာက္ေနတယ္ဆိုေတာ့ လႉေငြ ထည့္တခုနဲ႔ဘဲ့ ေက်နပ္ေနရတယ္ဗ်